သငျ့ခန်ဓာကိုယျပျေါမှာ ဘာကွောငျ့မှနျးမသိတဲ့ သှေးခွဥေဒဏျရာမြားက ဒီကနျြးမာရေးပွဿနာ (၇)ခုကွောငျ့ ဖွဈနိုငျ - Lifestyle Myanmar
Home Health & Beauty သငျ့ခန်ဓာကိုယျပျေါမှာ ဘာကွောငျ့မှနျးမသိတဲ့ သှေးခွဥေဒဏျရာမြားက ဒီကနျြးမာရေးပွဿနာ (၇)ခုကွောငျ့ ဖွဈနိုငျ
သငျ့ခန်ဓာကိုယျပျေါမှာ ဘာကွောငျ့မှနျးမသိတဲ့ သှေးခွဥေဒဏျရာမြားက ဒီကနျြးမာရေးပွဿနာ (၇)ခုကွောငျ့ ဖွဈနိုငျ
တဈခုခုနဲ့ တိုကျမိ ၊ခိုကျမိတာမရှိဘဲ သငျ့အသားအရပေျေါမှာ ဘာ့ကွောငျ့မှနျးမသိ အညိုအမညျးကှကျပျေါလာတာကို ကွုံဖူးကွမှာပါ။ ဒီလို အညိုအမညျးကှကျ သှေးခွညျဥဒဏျရာက မြားသောအားဖွငျ့ ထိရငျနာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အရောငျဖြော့လာတာနဲ့အမြှ နာကငျြတာကလညျး သကျသာသှားတတျပါတယျ။ လပေါငျးမြားစှာ မပြောကျဘဲရှိနမေယျ၊ မကွာခဏဖွဈနမေယျဆိုရငျ ကနျြးမာရေးပွဿနာတဈခြို့ကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါက ဘာ့ကွောငျ့ဖွဈတာလဲ၊ စိုးရိမျသငျ့သလား? ဆိုတာ သိခငျြကွမယျ ထငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့အသားအရပေျေါမှာ ဒီသှေးခွဥဒဏျရာတှကေ မကွာခဏဖွဈလာရငျ ခန်ဓာကိုယျမှာ ဘာတှဖွေဈပျေါနိုငျသလဲဆိုတဲ့ ဆရာဝနျမြားရဲ့ ထငျမွငျခကျြမြားကို စုဆောငျးထားပါတယျ။
၁။ အလေးမခွငျး၊ လေးလံတဲ့အရာတှကေို မခွငျး
အလေးမခွငျးက သှေးခွဥဒဏျရာတှအေတှကျ ဒုတိယဦးစားပေး အကွောငျးရငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ကာယလှုပျရှားမှု အလှနျအမငျးလုပျခွငျးက အကနျြးမာဆုံး သှေးကွောမြှငျလေးမြား ပကျြစီးမှုကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။ ဥပမာ သငျအဆငျ့သငျ့ မဖွဈသေးဘဲ ဝိတျမတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျမယျဆိုရငျ အန်တရာယျရှိနိုငျပါတယျ။
အလေးခြိနျအရမျးမြားတဲ့ ကြောငျးလှယျအိတျတှကေလညျး ကလေးတှမှော ဒီလိုသှေးခွဥဒဏျရာတှကေို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
ဒီလိုသှေးခွဥေဒဏျရာတှကေ အန်တရာယျအရမျးမမြားပမေယျ့ သငျဟာ အလှနျအကြှံလုပျနတေယျဆိုတဲ့ အခကျြကိုပွသနကွေောငျး ယုံကွညျရပါတယျ။
သှေးကြဲဆေးလို ဆေးမြိုးသောကျနရေတဲ့သူတှမှော ဒီလိုသှေးခွဥေဒဏျရာအသှငျအပွငျကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။ စိတျကရြောဂါကုဆေး၊ အကိုကျအခဲပြောကျဆေး၊ ရောငျရမျးမှုလြော့ကစြတေဲ့ဆေး၊ သံဓါတျပါဝငျသောဆေး သို့မဟုတျ ပနျးနာရငျကပျြဆေးတှကွေောငျ့လညျး ဖွဈပျေါပါတယျ။
အဖွဈအမြားဆုံးကတော့ သှေးကိုပိုပွီး ကြဲစတေဲ့ဆေးတှဖွေဈပွီး အကျစပရငျဆးက သှေးခွဥဒဏျရာကိုဖွဈစပေါတယျ။
ဆေးဝါးတှသေောကျသုံးခွငျးနှငျ့ သငျ့အရပွေားပျေါမှာ ရောငျရမျးခွငျးအကွား ခြိတျဆကျမှုကို သတိပွုမိလြှငျ ဆရာဝနျနှငျ့ ပွသသငျ့ပါတယျ။
သှေးနှငျ့ သှေးကွောရောဂါမြားက သှေးခွဥေခွငျးကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။ Varicosisရောဂါ, Willebrandရောဂါ, thrombocytopenia ရောဂါ၊ သှေးကငျဆာ တို့က သှေးလညျပတျမှုစနဈနှငျ့အတူ ပွဿနာမြားကို မကွာခဏဖွဈစပေါတယျ။
နာကငျြတာ၊ ခွထေောကျရောငျရမျးတာ၊ သှားဖုံးသှေးထှကျတာ၊ ခန်ဓာကိုယျပျေါမှာ သှေးကွောဆံခညျြမြှငျ အစကျအပွောကျသေးသေးလေးတှေ ဖွဈပျေါတာ၊ နှာခေါငျးသှေးထှကျတာ စတဲ့တခွားစိုးရိမျစရာလက်ခဏာမြားကို သတိပွုမိလြှငျ ဆရာဝနျနှငျ့ သှားပွဖို့မမပေ့ါနဲ့။
ရှငျးပွလို့မရတဲ့ အခြို့ သှေးခွဥေဒဏျရာတှကေ ခန်ဓာကိုယျမှာ လိုအပျသော ဒွပျစငျတှကေငျးမဲ့နတေဲ့ အခကျြပွတဈခု ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ- B12 ကသှေးထုတျလုပျခွငျးမှာ တဈစိတျတဈပိုငျးနရောယူပွီး ဗီတာမငျKက သှေးခဲခွငျးအတှကျ တာဝနျယူရပါတယျ။ ဗီတာမငျ စီက တဈရှူးအသဈတှေ ဖနျတီးခွငျးမှာ အရေးပါသော အခနျးကဏ်ဍမှ ပါဝငျပါတယျ။ ဒါတှေ မရှိရငျ သှေးကွောမြားက အရမျးပကျြစီးလှယျလာပါတယျ။
တခွားအရေးအကွီးဆုံး ဗီတာမငျက P ဖွဈပါတယျ။ ၎င်းငျးမရှိရငျ သှေးကွောမြားက အရပွေားအဆငျ့ကို ပိုမိုဆိုးဝါးလာအောငျ ပါးလှာစတောကွောငျ့ ကျောလာဂငျြထုတျလုပျမှုက မဖွဈနိုငျပါဘူး။
သံဓါတျမြှတမှုက ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။ သံဓါတျခြို့တဲ့တာ သို့ သံဓါတျအရမျးမြားတဲ့အခါ သှေးကွောမြှငျကလေးမြား ပိုဆိုးသှားပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဗီတာမငျတှေ ကိုအစောတလငျြ ဝယျမသောကျပါနဲ့။ ပထမဆုံး ဗီတာမငျခြို့တဲ့တာလားဆိုတာ စဈဆေးဖို့လိုပွီး ဗီတာမငျကွှယျဝတဲ့ အစားအစာမြားကို သငျ့အစားအသောကျထဲမှာ တိုးပွီးစားပေးပါ။
ဗီတာမငျ P အရငျးအမွဈတှကေ လတျဆတျတဲ့ green tea၊ ပနျးသီးမြား၊ ရှဖေရုံသီးနှငျ့ ကွကျသှနျဖွူတို့ ဖွဈပါတယျ။ ဗီတာမငျ K ကို ငှကျပြောသီး၊ ကွကျဥ၊ အခှံမာသီးနှငျ့ အဆီမြားသော ငါးတှမှော တှရှေိ့နိုငျပါတယျ။ B 12 ကို အသညျး ၊ငါး ၊ဒိနျခဲနှငျ့ ဆလတျတို့မှာ တှနေို့ငျပါတယျ။
ဟျောမုနျး အပွောငျးအလဲမြားက သှေးခွဥေဒဏျရာတှကေို ဖွဈပျေါစတေဲ့ အဖွဈအမြားဆုံးအကွောငျးရငျး တဈခုဖွဈပါတယျ။ သငျ့မှာ အီစရိုဂငျြနိမျ့ကလြှငျ သူတို့ ပျေါလာနိုငျပါတယျ။
ထိုကဲ့သို့သော အခွအေနမြေိုးက ဟျောမုနျးဆေးတှေ သောကျနရေလြှငျ၊ ကိုယျဝနျဆောငျနသေူဖွဈလြှငျ၊ သှေးဆုံးအသကျအရှယျရောကျလြှငျ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အီစရိုဂငျြ သိသိသာသာ ကငျးမဲ့ခွငျးက သှေးကွောတှကေို အားနညျးစပွေီး သှေးကွောမြှငျနံရံမြားကို အလှယျတကူ ပကျြစီးစနေိုငျပါတယျ။
အသကျအရှယျ ကွီးရငျ့လာသူမြားမှာ သှေးကွောနံရံတှေ တဖွညျးဖွညျး အားနညျးလာတာကွောငျ့ ဖွဈရတာလို့ ဆရာဝနျမြားက ဆိုပါတယျ။ သှေးကွောစနဈက အသကျအရှယျနှငျ့အတူ အားနညျးသှားပွီး တဈရှူးမြားမှာ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ elasticity ဆုံးရှုံးသှားလို့ ဖွဈပါတယျ။
ဆီးခြိုရောဂါက သှေးလညျပတျမှုရဲ့ ဖွဈစဉျပျေါမှာ ဆိုးကြိုးသကျရောကျတာကွောငျ့ သှေးခွဥေခွငျးကို အလှယျတကူ ဖွဈပျေါစပေါတယျ။ သှေးခွဥေတာက အစောပိုငျးအဆငျ့မှာ ဒီရောဂါရဲ့ လက်ခဏာတဈခုဖွဈနိုငျပါတယျ။
အခွားသော ရောဂါလက်ခဏာမြားက မကွာခဏ ရငေတျတာ၊ အနာကကျြမှု ကွာတာ၊ ပငျပနျးလှယျတာ၊ အမွငျအာရုံ မှုနျဝါးတာနှငျ့ အသားအရပေျေါမှာ အဖွူစကျတှေ ရှိတာတို့ ဖွဈပါတယျ။
သှေးခွဥေဒဏျရာတှကေ အန်တရာယျရှိလား၊ မရှိဘူးလား?
ဒဏျရာရပွီးရငျ သှေးခွဥေဒဏျရာက အနီရောငျပွောငျးသှားပါတယျ။ ဒါက အရပွေားအောကျက သှေးအရောငျဖွဈလို့ပါ။ နာရီအနညျးငယျကွာမှ ခန်ဓာကိုယျက သှေးပွိုကှဲမှု စတငျပွီး သှေးခွဥေဒဏျရာမြားက အမညျးရောငျ ၊ အပွာရောငျ သို့ ခရမျးရောငျ ပွောငျးလာပါတယျ။ ၅ရကျကနေ ၁၀ရကျအတှငျး အနာကကျြခါနီးရငျ ဒဏျရာဧရိယာက အဝါရောငျ သို့ အစိမျးရောငျ ဖွဈလာပါတယျ။ ဒဏျရာရပွီး ၁၀ရကျ ၁၄ရကျအတှငျးမှာ နောကျဆုံးအဆငျ့ အညိုရောငျပွောငျးသှားပွီး အရောငျပိုပါးလာပွီး တဖွညျးဖွညျးပြောကျသှားပါတယျ။
သတိထားရမှာက သာမနျသှေးခွဥဒဏျရာက ဒဏျရာရပွီး ၂ပတျအတှငျး လုံးဝညှိုးသှားပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သှေးခွဥေဒဏျရာက ၂ပတျကွာလို့မှ ပြောကျမသှားဘူးဆိုရငျ ဆရာဝနျနှငျ့ ပွသသငျ့ပါတယျ။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ဘာကြောင့်မှန်းမသိတဲ့ သွေးခြေဥဒဏ်ရာများက ဒီကျန်းမာရေးပြဿနာ (၇)ခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်
တစ်ခုခုနဲ့ တိုက်မိ ၊ခိုက်မိတာမရှိဘဲ သင့်အသားအရေပေါ်မှာ ဘာ့ကြောင့်မှန်းမသိ အညိုအမည်းကွက်ပေါ်လာတာကို ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒီလို အညိုအမည်းကွက် သွေးခြည်ဥဒဏ်ရာက များသောအားဖြင့် ထိရင်နာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရောင်ဖျော့လာတာနဲ့အမျှ နာကျင်တာကလည်း သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။ လပေါင်းများစွာ မပျောက်ဘဲရှိနေမယ်၊ မကြာခဏဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ချို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲ၊ စိုးရိမ်သင့်သလား? ဆိုတာ သိချင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အသားအရေပေါ်မှာ ဒီသွေးခြဥဒဏ်ရာတွေက မကြာခဏဖြစ်လာရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်သလဲဆိုတဲ့ ဆရာဝန်များရဲ့ ထင်မြင်ချက်များကို စုဆောင်းထားပါတယ်။
၁။ အလေးမခြင်း၊ လေးလံတဲ့အရာတွေကို မခြင်း
အလေးမခြင်းက သွေးခြဥဒဏ်ရာတွေအတွက် ဒုတိယဦးစားပေး အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကာယလှုပ်ရှားမှု အလွန်အမင်းလုပ်ခြင်းက အကျန်းမာဆုံး သွေးကြောမျှင်လေးများ ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ သင်အဆင့်သင့် မဖြစ်သေးဘဲ ဝိတ်မတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
အလေးချိန်အရမ်းများတဲ့ ကျောင်းလွယ်အိတ်တွေကလည်း ကလေးတွေမှာ ဒီလိုသွေးခြဥဒဏ်ရာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုသွေးခြေဥဒဏ်ရာတွေက အန္တရာယ်အရမ်းမများပေမယ့် သင်ဟာ အလွန်အကျွံလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုပြသနေကြောင်း ယုံကြည်ရပါတယ်။
သွေးကျဲဆေးလို ဆေးမျိုးသောက်နေရတဲ့သူတွေမှာ ဒီလိုသွေးခြေဥဒဏ်ရာအသွင်အပြင်ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါကုဆေး၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ ရောင်ရမ်းမှုလျော့ကျစေတဲ့ဆေး၊ သံဓါတ်ပါဝင်သောဆေး သို့မဟုတ် ပန်းနာရင်ကျပ်ဆေးတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။
အဖြစ်အများဆုံးကတော့ သွေးကိုပိုပြီး ကျဲစေတဲ့ဆေးတွေဖြစ်ပြီး အက်စပရင်ဆးက သွေးခြဥဒဏ်ရာကိုဖြစ်စေပါတယ်။
ဆေးဝါးတွေသောက်သုံးခြင်းနှင့် သင့်အရေပြားပေါ်မှာ ရောင်ရမ်းခြင်းအကြား ချိတ်ဆက်မှုကို သတိပြုမိလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ပြသသင့်ပါတယ်။
သွေးနှင့် သွေးကြောရောဂါများက သွေးခြေဥခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ Varicosisရောဂါ, Willebrandရောဂါ, thrombocytopenia ရောဂါ၊ သွေးကင်ဆာ တို့က သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်အတူ ပြဿနာများကို မကြာခဏဖြစ်စေပါတယ်။
နာကျင်တာ၊ ခြေထောက်ရောင်ရမ်းတာ၊ သွားဖုံးသွေးထွက်တာ၊ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ သွေးကြောဆံချည်မျှင် အစက်အပြောက်သေးသေးလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်တာ၊ နှာခေါင်းသွေးထွက်တာ စတဲ့တခြားစိုးရိမ်စရာလက္ခဏာများကို သတိပြုမိလျှင် ဆရာဝန်နှင့် သွားပြဖို့မမေ့ပါနဲ့။
ရှင်းပြလို့မရတဲ့ အချို့ သွေးခြေဥဒဏ်ရာတွေက ခန္ဓာကိုယ်မှာ လိုအပ်သော ဒြပ်စင်တွေကင်းမဲ့နေတဲ့ အချက်ပြတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- B12 ကသွေးထုတ်လုပ်ခြင်းမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနေရာယူပြီး ဗီတာမင်Kက သွေးခဲခြင်းအတွက် တာဝန်ယူရပါတယ်။ ဗီတာမင် စီက တစ်ရှူးအသစ်တွေ ဖန်တီးခြင်းမှာ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါတွေ မရှိရင် သွေးကြောများက အရမ်းပျက်စီးလွယ်လာပါတယ်။
တခြားအရေးအကြီးဆုံး ဗီတာမင်က P ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းမရှိရင် သွေးကြောများက အရေပြားအဆင့်ကို ပိုမိုဆိုးဝါးလာအောင် ပါးလွှာစေတာကြောင့် ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုက မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
သံဓါတ်မျှတမှုက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ သံဓါတ်ချို့တဲ့တာ သို့ သံဓါတ်အရမ်းများတဲ့အခါ သွေးကြောမျှင်ကလေးများ ပိုဆိုးသွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဗီတာမင်တွေ ကိုအစောတလျင် ဝယ်မသောက်ပါနဲ့။ ပထမဆုံး ဗီတာမင်ချို့တဲ့တာလားဆိုတာ စစ်ဆေးဖို့လိုပြီး ဗီတာမင်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများကို သင့်အစားအသောက်ထဲမှာ တိုးပြီးစားပေးပါ။
ဗီတာမင် P အရင်းအမြစ်တွေက လတ်ဆတ်တဲ့ green tea၊ ပန်းသီးများ၊ ရွှေဖရုံသီးနှင့် ကြက်သွန်ဖြူတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် K ကို ငှက်ပျောသီး၊ ကြက်ဥ၊ အခွံမာသီးနှင့် အဆီများသော ငါးတွေမှာ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ B 12 ကို အသည်း ၊ငါး ၊ဒိန်ခဲနှင့် ဆလတ်တို့မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲများက သွေးခြေဥဒဏ်ရာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းရင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာ အီစရိုဂျင်နိမ့်ကျလျှင် သူတို့ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးက ဟော်မုန်းဆေးတွေ သောက်နေရလျှင်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူဖြစ်လျှင်၊ သွေးဆုံးအသက်အရွယ်ရောက်လျှင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အီစရိုဂျင် သိသိသာသာ ကင်းမဲ့ခြင်းက သွေးကြောတွေကို အားနည်းစေပြီး သွေးကြောမျှင်နံရံများကို အလွယ်တကူ ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာသူများမှာ သွေးကြောနံရံတွေ တဖြည်းဖြည်း အားနည်းလာတာကြောင့် ဖြစ်ရတာလို့ ဆရာဝန်များက ဆိုပါတယ်။ သွေးကြောစနစ်က အသက်အရွယ်နှင့်အတူ အားနည်းသွားပြီး တစ်ရှူးများမှာ ၎င်းတို့ရဲ့ elasticity ဆုံးရှုံးသွားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါက သွေးလည်ပတ်မှုရဲ့ ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်တာကြောင့် သွေးခြေဥခြင်းကို အလွယ်တကူ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ သွေးခြေဥတာက အစောပိုင်းအဆင့်မှာ ဒီရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အခြားသော ရောဂါလက္ခဏာများက မကြာခဏ ရေငတ်တာ၊ အနာကျက်မှု ကြာတာ၊ ပင်ပန်းလွယ်တာ၊ အမြင်အာရုံ မှုန်ဝါးတာနှင့် အသားအရေပေါ်မှာ အဖြူစက်တွေ ရှိတာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးခြေဥဒဏ်ရာတွေက အန္တရာယ်ရှိလား၊ မရှိဘူးလား?
ဒဏ်ရာရပြီးရင် သွေးခြေဥဒဏ်ရာက အနီရောင်ပြောင်းသွားပါတယ်။ ဒါက အရေပြားအောက်က သွေးအရောင်ဖြစ်လို့ပါ။ နာရီအနည်းငယ်ကြာမှ ခန္ဓာကိုယ်က သွေးပြိုကွဲမှု စတင်ပြီး သွေးခြေဥဒဏ်ရာများက အမည်းရောင် ၊ အပြာရောင် သို့ ခရမ်းရောင် ပြောင်းလာပါတယ်။ ၅ရက်ကနေ ၁၀ရက်အတွင်း အနာကျက်ခါနီးရင် ဒဏ်ရာဧရိယာက အဝါရောင် သို့ အစိမ်းရောင် ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒဏ်ရာရပြီး ၁၀ရက် ၁၄ရက်အတွင်းမှာ နောက်ဆုံးအဆင့် အညိုရောင်ပြောင်းသွားပြီး အရောင်ပိုပါးလာပြီး တဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားပါတယ်။
သတိထားရမှာက သာမန်သွေးခြဥဒဏ်ရာက ဒဏ်ရာရပြီး ၂ပတ်အတွင်း လုံးဝညှိုးသွားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သွေးခြေဥဒဏ်ရာက ၂ပတ်ကြာလို့မှ ပျောက်မသွားဘူးဆိုရင် ဆရာဝန်နှင့် ပြသသင့်ပါတယ်။
Previous articleမိခငျဆေးရုံတကျခြိနျ အိမျမှာကနျြခဲ့တဲ့ ကလေး၅ယောကျကို ညစာသှားလုပျကြှေးတဲ့ ရဲ၂ဦး
Next articleလှဲမှားနတေဲ့ Relationship တဈခုရဲ့ လက်ခဏာ (၁၀) ခကျြ